Lautaro Martinez oo fariin u diray kooxda Juventus kahor kulanka Derby d’Italia – Gool FM
Lautaro Martinez oo fariin u diray kooxda Juventus kahor kulanka Derby d’Italia
(Milano) 31 Jan 2021. Inter Milan ayaa garoonkeeda Giuseppe Meazza guul weyn kaga gaartay kooxda Benevento, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Guusha ay xalay gaartay Inter Milan waxaana uga mahadcelinaya labo gool oo uu dhaliyay Lukaku, marka lagu daro kubad counter-attack ah oo uu u saxiixay Christian Eriksen iyo gool uu dhaliyay weeraryahanka reer Argentina Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez ayaa dhaliyay gool wuxuuna caawiyay gool kale, wuxuuna xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu hoggaamiyo safka weerarka Nerazzurri kulanka Talaadada ay ku wajahayaan Juventus lugta hore ee semi-finalka Coppa Italia.
Lukaku ayaa seegi doona kulanka sida weyn loo wada sugayo ee ka dhici doono garoonka San Siro laba maalmood kaddib, maadaama uu la kulmay ganaax hal kulan ah, kaddib dagaalkii dhex maray isaga iyo xiddiga AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic.
Lautaro Martinez ayaa kahor dagaalka markale ku dhex mari doono garoonka dhexdiisa iyaga iyo Juventus, wuxuu warbaahinta u sheegay:
“Waan ku faraxsanahay maxaa yeelay waxaan wajihi doonaa Juventus, kuwani waa kulamada aan jeclahay.”
“Iyagu waa koox aad u adag, la ciyaarista kooxahan oo kale waa wax cajiib ah, kulankii horyaalka oo ay Inter ku adkaatay 2-0 waxaan tusnay inaan isku heer nahay diyaarna nahay.”
“Hadda waxaan arki doonaa waxa ka dhici doona Coppa Italia, laakiin waxaan nahay Inter, waana intaas waxa aan sheegayo.”
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Chelsea iyo Burnley ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey